‘२ पुरुषले मलाई यस्तो बनाए न्याय दिनुस्’भन्दै भक्कानिइन माता हेर्नुहोस् भिडियो – Tufan Media News
‘२ पुरुषले मलाई यस्तो बनाए न्याय दिनुस्’भन्दै भक्कानिइन माता हेर्नुहोस् भिडियो
२२ पुष २०७७, बुधबार १४:४५
काठमाडौ । काठमाडौको थानकोटमा माताका नामले परिचित एक महिलालाई कु’टि’एको छ । शीला थापा नाम गरेकी महिला माथि छिमेकीले यस्तो अवस्था गराएका हुन् । जमिन र सिमानाका कारण छिमेकीसंग भएको विवाद पछि उनी माथि घटना भएको बताएकी छन् ।
शिलाको भनाई अुनसार उनको छिमेकीले आफ्नै जग्गामा केही काम गर्न खोज्दा पनि गर्न दिंदैनन् । बरु उल्टै छिमेकीहरुले उनको घरको जग्गाबाट नक्सामा हुँदै नभएको बाटो निकालेर उनको जग्गा खनिदिन्छन् ।
सोही विषयमा उनको आफ्ना छिमेकीहरुसंग धेरै पटक बादबिबाद भई सकेको पनि छ । तर यस पटक भने अचम्मैको कसैले पनि नसोंचेको घटना हुन पुग्यो । जस्को नतिजा हो शिलामाथि उनको छिमेकी सबैले गरेको हा’त’पा’त ।
अस्पतालको बे’डबाटै रुँदै शिलाले आज भएको घटनाको विषयमा वास्तविक कुरा भनेकी छन् । उनको भनाईमा उनी आफ्नै घरमा पनि छिमेकीहरुबाट असुरक्षित भएकी छन् । बिना कारण नै निहुँ खोज्न छिमेकीहरु आई पुग्ने बताउँदै शिलाले त्यस्ताहरुसंग जोगिएरै बस्न गाह्रो भएको उनले बताईन् ।
छिमेकीको कु’टा’ईले अहिले आफुलाई निकै नै पि’डा भएको बताउँदै शिलाले आफुलाई हा’त’पा’त गर्ने सबैलाई कानून बमोजिमको सजायको माग समेत गरेकी छन् । भिडियोसहित
चर्चामा नरेश र मेक्समको
खोलामा हा म्फाल्नु अगाडि
ईन्द्रेणिका टिका सानुको यो
घास काट्न गएकी आमा
बिश्वकर्मा पुजाको दिन धर्ती
रुपन्देहीमा हेर्नुहोस्।…. सीतालाई श्रीमानले
‘कमेडी च्याम्पियन’को आज फाइनल, कसले जित्ला कार ?
महिलाले अर्डर गरिन् चि’केन बर्गर, पहिलो गाँसमै भेटिन् मान्छेको औंला
यिनै हुन् पोर्चुगलबाट खुसि हुदै नेपाल फर्केका श्रीमान श्रीमती हिजो दु’र्घटना हुदा अकालमै गुमा’ए ज्या’न
करिश्मालाई पुर्व प्रधानमन्त्री ओलीको फोन– ‘परीक्षा कस्तो भइरहेको छ ?’
बर्दियामा एकै परिवारका तीन जनाको मृ’त्यु
चर्चामा नरेश र मेक्समको “मेरो बाबा सुपरम्यान”( भिडियो)
खोलामा हा म्फाल्नु अगाडि देवरसँग भेटेकी थिइन् पवित्राले,संगै गएका साथीले खोले सबै कुरा (भिडियो हेर्नुस्)
ईन्द्रेणिका टिका सानुको यो भिडियो हेरेर नरुने कोहोलार ? -भिडियो सहित
घास काट्न गएकी आमा भर्खरै भारतमा फेला ,कस्ले लग्यो ? ९ बर्सिय छोरीको आमालाई यस्तो सन्देश
बिश्वकर्मा पुजाको दिन धर्ती माताले भद्रकालीमा देखाइन अर्को शक्ती, हेर्नुस रुखमा चडेर यस्तो ताण्डब गरेपछि सबै भक्तहरु रोए( भिडियो)